Ukunyusa iAkhawunti yokuThengisa- Aplus Global Ecommerce
Ukunyusa ukuthengisa kwishishini le-e-commerce ngumdlalo webhola ohluke ngokupheleleyo kunakwishishini elingaxhunyiwe kwi-intanethi. Ukusuka kwimbonakalo yomthengi esekuhleni kunye neyokwenyani yokuba nebhokisi yokuthenga, kukho izinto ezahlukeneyo zentengiso ekwi-Intanethi enzima kakhulu. Ngapha koko, ukhuphiswano olunamandla oluvela kumashishini amatsha avelayo luyenza le ndlela ibe yingozi. Iimpawu eziguqukayo zeemarike ezikwi-Intanethi zifuna iindlela ezintsha nezobuchule zokukhula okuzinzileyo kwintengiso. Ukongeza kuloo nto, imigaqo kwi-e-Commerce arene iyaqhubeka itshintsha ngetekhnoloji entsha kunye nokwandisa ngokukhawuleza isiseko sabathengi. Kuzo zonke ezi zizathu amashishini ahlala efuna inkxaso yokunyusa ukuthengisa kunye nokwenza inzuzo
Abacwangcisi bezentengiso kunye nabathengisi e I-Aplus kwi-Ecommerce yeHlabathi banobuchule bokunyusa ukuthengisa kweenkampani ezininzi ze-e-Commerce kwiminyaka yabo yamava ebaleni. Sinceda iiakhawunti zeAmazon zonyusa ukuthengisa ngokuncedisa kwezi nkalo:
Ukuphumelela ibhokisi yokuthenga
Ukuphuculwa koMxholo wePhepha leMveliso
Ixabiso kunye nokwenza isaphulelo
Iingcebiso zokuphatha abathengi
La macandelo zizinto eziphambili ezimisela ukuthengisa kwishishini. Ukulawula ezi zinto kunokuba sisixhobo esinamandla sokulawula ukuthengisa ngokunjalo.